အစိုးရ သဘောကျသူသာ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာနိုင်ဟု ယခင်ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်? - Yangon Media Group
အစိုးရသဘော ကျသူသာ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီဝင်ဟောင်း ဦးခင်လှိုင်က ဝေဖန်လိုက်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်က ရန်ကုန်စီးတီး ဟိုတယ်တွင် ရန်ကုန်စည်ပင်ရွေးကောက် ပွဲဘယ် လောက်အရေးပါလဲ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် DVB Debate တွင် ဦးခင်လှိုင်က အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြော ကြားလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။
”ပြည်သူရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ ကော် မတီဝင်ခြောက်ယောက်ရှိတယ်။ အစိုးရ ခန့်ထားသူ ငါးဦးစလုံးက ဒီခြောက်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင် သူက ခြောက်မဲအလိုလိုဖြစ်သွားမယ်။ အဲဒါဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုမြို့တော်ဝန်ဆိုတဲ့ နေရာက အစိုးရကနေသဘောကျတဲ့သူပဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်နည်းတူ မြို့တော် ဝန်သည်လည်း ပြည်သူကရွေးကောက်တင် မြှောက်ခံရသူဖြစ်သင့်ပြီး ဒုတိယမြို့တော် ဝန်ကို အစိုးရကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ခြင်းခံထားရသည့် ကိုယ်စားလှယ်များက မရွေး ချယ်ဘဲ ပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ ရသူ ခြောက်ဦးကသာ အချင်းချင်းပြန်လည် ရွေးချယ်သင့်ကြောင်း ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှူး ဒေါ်သဉ္ဇာရွန်းလဲ့ ရည်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
”ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့သူတွေထဲ က အချင်းချင်းရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ရှိပြီး သားခန့်အပ် ငါးဦးက မဲဝင်ပေးဦးမယ်ဆိုတဲ့ စနစ်က တော်တော်လေးကိုမတရားဖြစ် သွားတယ်။ ငါးဦးက ခြောက်ဦးထဲကပါတီ တစ်ခုခုက ချိတ်ဆက်တဲ့သူတစ်ယောက် ယောက်က မဲကိုဝယ်လိုက်နိုင်တယ်၊ ညှိ လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် မဲက ငါးဦး ငါးဦး တူတူပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ တကယ့်ခြောက် ဦးထဲက ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့သူက မဲဆုံး ရှုံးနိုင်ခြေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မ တီဝင် ခြောက်ဦးနေရာအတွက် လူဦးရေ အပေါ်အခြေခံပြီး မဲဆန္ဒနယ် ခြောက်ခု ခွဲခြားထားပြီး အစိုးရခန့်အပ်ထားသော မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် ငါးဦးနှင့် ပေါင်းပါက ၁၁ ဦးရှိလာမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ¤င်းတို့ခြောက်ဦးအနက်မှ ဒုတိယ မြို့တော်ဝန်အဖြစ် ကော်မတီဝင် ၁၁ ဦးက လျှို့ဝှက်စနစ်ဖြင့် မဲပေးရွေးချယ်ခန့်အပ် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကော်မတီဝင်အဆင့် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လျှောက်လွှာတင်ထားသူ ဦးကျော်စိုးထွဋ် (နွယ်ရိုး)က ”ပါတီ တံဆိပ်နဲ့ဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရတဲ့ကိုယ် စားလှယ်က မျက်နှာငယ်တယ်။ ကိုယ့်ဘာ သာကိုယ် ဝင်ပြိုင်လို့နိုင်တဲ့သူက မျက်နှာပွင့်လန်းတာပေါ့။ ကျွန်တော်က တစ်သီးပုဂ္ဂလပါ။ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးစား ပေးပြီးတော့ ပြိုင်သွားမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်က တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့ကြသည့် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ အငြိမ်??